विशेष उदयपुरमा नारायण खड्काले नतिजा उल्ट्याए, मन्जु चौधरी पराजित
Ujyaalo सोमवार, मंसिर २५, २०७४ १९:५६:००
सुमित्रा कोइराला /उज्यालो ।
उदयपुर, मंसिर २५– उदयपुर १ मा नेपाली कांग्रेसका डा. नारायण खडका विजयी हुनु भएको छ । एमालेका मन्जु चौधरीसँग सुरु देखिनै उछिना उछिन भएपनि अन्तिममा खड्काले ५ सय ४८ मतको अन्तरले जित्नु भएको हो ।
जितसँगै खड्काको उदयपुरमा अपराजित यात्राले निरन्तरता पाएको छ । उहाँले ३३ हजार १ सय ४२ र एमालेकी मञ्जु चौधरीले ३२ हजार ५ सय ९४ मत ल्याउनुभयो ।
२०७० सालको चुनावमा ३ क्षेत्र रहेको उदयपुरमा खड्का १ र चौधरी २ बाट विजयी हुनु भएको थियो । तर यसपालि निर्वाचन क्षेत्र २ वटा मात्रै भएपछि खड्का र चौधरीको प्रतिस्पर्धा भएको हो ।
खड्काको राजनीतिक यात्रा
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्काको जन्म २००५ साल चैत ७ गते भोजपुरमा भएको हो । उहाँका बुबाको नाम चित्रबहादुर खड्का र आमाको नाम धर्मकुमारी खड्का हो । २०२३ सालमा विद्यार्थी संगठनबाट राजनीतिक यात्रा थालेका खड्काले अर्थशास्त्रमा भारतको पुनेबाट विद्यावारिधी (पिएचडी) गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत भएका खड्काले नेपाली कांग्रेसका नेता स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको सल्लाहकारका रुपमा काम गर्नुभएको थियो । यस्तै उहाँ शहरी विकास मन्त्री समेत बन्नु भएको थियो ।
२०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा उदयपुर क्षेत्र नम्वर १ बाट विजयी भएका खड्काले १४ हजार ४ सय ६८ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एकीकृत नेकपा (माओवादी) का राजन किराँतीले १३ हजार २ सय ३६ मत र तेश्रो स्थानमा रहेका नेकपा एमालेका अशोककुमार राईले ९ हजार ८ सय १० मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
दोश्रो संविधान सभाको चुनाव २०७० मा पनि खड्का यही क्षेत्रबाट १५ हजार ३ सय ८१ मत ल्याएर विजयी हुनुभयो । खड्का यस क्षेत्रमा विकासवादी नेताका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ ।